Moments leh saaxiibo 44
Maaddada dugsiga hoose / dhexe, maaddooyinka maskaxeed, waa in la keenaa qaab la taaban karo by gacmaha; haddii ay sidaas tahay, nooca gaarka ah ee la soo saari karo iyo sida loo sameeyo?
Waxaa suurtagal ah qofka leh awoodaha maskaxeed ee lagama maarmaanka ah iyo ururada maskaxda si ay u helaan nolol jireed hababka sixirka ah qaab kasta oo uu rabo; iyo weliba, waxaa laga yaabaa in ay jaban tahay dhamaadka isaga si uu u helo shaygan sida dadka kale helayaan walxaha rabitaankooda. Iyada oo gacmaha sida matrix kasta deebaajiga macdanta ama foomka geometrical waxaa laga yaabaa in laga daadiyo arrin asal ah. Sidoo kale arrinka halbeegga ahi wuxuu noqon karaa gacmaha gacmaha oo la isku daro oo loo qaabeeyo qaab adag.
Awoodaha ruuxiga ah iyo maskaxda ee lagama maarmaanka u ah mid ka mid ah oo siinaya foomka muuqaalka ah ee arin aan la arki karin waa: iimaan, rabitaan, iyo malayn. Intaa waxaa sii dheer, jirkiisa asalkiisu waa inuu awood u yeesho inuu heysto oo uu abuuro magnetism badan. Qof kastaa wuxuu leeyahay rumaysad, rabitaan iyo fikrad; laakiin, waa in lagu sakhiray, waa in kor loo qaado awoodda sare. Ma jirto shaqo aan rumaysad lahayn. Waayo, shuqulkii gacmahayaga muxuu igu samayn waayay, oo miyaannu addeecnay rumaysadkiinna? Rumaysadkani maaha inay ahaato natiijo ka dhalatay shaqadiisa iyo dadaalka noloshooda. Saaxiibkayagu waa inuu leeyahay rumaysad uu u leeyahay in uu keeno aragti aan la arki karin, si aan u dhigno maqal aan la aqoonsan karin, si aan u hirgelino wixii aan la taaban karin, si loo soo saaro dareemada ay inta badan aan awoodin in ay fahmaan. Haddii uusan rumaysnayn in waxyaalahan la samayn karo, hadduu rumaysadkiisu aanu rumaysnayn, markaas isagu ma awoodo. Haddii uu aaminsan yahay inuu samayn karo shaqooyin sixir ah sababtoo ah qof ayaa u sheega inuu awoodo, wuxuu aaminsan yahay maahan rumaysad. Waxay aaminsan tahay, aragti. Waayo, shuqulladiisa xoogga leh oo dhammu waa inay iimaanka laga saaraa, oo waa inay raxmaddaada waafaqsanaadaan. Iimaanka oo sidaas oo kale wuxuu ka yimaadaa aqoonta la ilaaway, ee la soo dhaafay. Isagu waa inuusan ku qancin rumaysad daran, laakiin waa inuu hore u keenaa aqoonta. Waa inuu maanka ku hayaa. Haddii uu rabo inuu fikirkiisa maskaxdiisa ku dhaqmo, wuxuu aaminsan yahay inuu ku hagayo hawlgallada maskaxeed wuxuuna u bixin doonaa habkii horey u ahaan lahaa aqoonta hadda jirta.
Sida maskaxiyan, mujiriyaheena waa inuu ka duwanyahay kuwa loogu yeero dadka maskaxda ku ah, sababtoo ah waxay leeyihiin duulimaadyo. Aragtidu waa sameynta sawirada, ama gobolka taas oo sawirrada la sameeyay. Sawirada muusikada noociisa ah waa sawirro maskaxeed iyo marka, markii la sameeyey, aan si fudud u jajabin sida kuwa dhoobada ah ama arrin kale oo jireed. Sawirada saaxirkayaga way adag yihiin in la sameeyo oo la jebiyo oo ka sii dheeraado kuwa ka soo jeeda marble ama birta. Si aad u malaynayso inuu muhiim u yahay shaqadiisa, maskaxdeena waa in uu maskaxdiisa ku hagaajiyaa wixii uu ku siin lahaa qaab jidheed. Waa inuu sawir ka dhigaa. Tani waxay ku sameeyneysaa maskaxda ku haysa foomka illaa ay u tahay sawir, kaas oo uu mar kale ugu yeeri karo fikirka. Marka uu qabo rumaysad oo uu samayn karo sawirro, wuxuu sidoo kale leeyahay. Taasi waa in la yiraahdo, wuxuu awoodaa inuu waco rabitaankiisa si uu uga caawiyo shaqadiisa. Doontu waa meel kasta oo sida korontada oo had iyo goor diyaar u ah inay awood u siiso qof kasta oo u shaqeeya hawsha hawlgalladiisa iyo kan ka dhigi kara inuu la xiriiro goobta.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyada dabaasha waxaa lagu sharxi karaa saxnaanta xisaabta; Hase yeeshee, haddii mid ka mid ah biyaha uu isku dayo inuu raaco jihooyinka, laakiin uusan rumaysan karin awooddiisa inuu ku dabaasho oo aanu ku qiyaasin inuu naftiisa dabaashayo marka uu sameynayo dhaqdhaqaaqyada, markaa ma uusan dabbaalan doonin. Shaki oo markaa cabsiguu qabtaa, oo wuu boobaa. Iskuday inaad ku socoto xadhig adag, mid aan rumaysnayn in uu ku socon karo oo uusan naftiisa qiyaasin xadhigga iyo socodka xadhigga xadhigga si uu u dhaco, oo uu sameeyo. Aqoonta leh shuruucda culeyska iyo fiisigaba ma hayn doonaan xadhiggaas. Rumaysashadu wuxuu muujinayaa sida. Aragtidu waxay ku haysaa xarigga. Wuxuu awood u siinayaa inuu ku socdo. Ilaa iyo inta uu naftiisa u maleynayo xarigga iyo kalsoonida uu sii socdo, ma dhici karo. Laakiin waa inuu fekerkiisa isbeddelaa, oo isagu waa inuu jajabiyaa qiyaasta labaad ee uu isku dhaco, sawirka uu ka dhigo in uu dhaco wuu iska dheeli doonaa oo jiidi doonaa.
Qalabaynta rumaysad, rabitaan, iyo malayn, mid ayaa soo saari kara by gacmihiisii ​​dhaqdhaqaaq jireed by hababka sixirka. Si aad u muujiso: Si aad u bixiso aragti muuqaaleed ee foomka, foomka waa in la qabtaa ama la qiyaaso. Xaaladda dareeraha oo aan la arki karin, waa in la qabtaa is afgarad ilaa ay noqoto mid joogto ah iyo fikradda adag. Tani waxay u shaqeyneysaa fikradda. Passes hadda waxaa lagu samayn karaa gacmaha agagaarka iyo ku saabsan foomka la doonayo. Dhaqdhaqaaqyada gacmaha ee ku xeeran foomka, arimaha asaasiga ah ayaa la sameeyaa oo si deg-deg ah loogu soo rogaa qaabkani, si tartiib ahna ula socdo roobabku sii socdo, foomku wuxuu noqonayaa muuqaal iyo jir ahaan. Tan waxaa sameeya awooda iimaanka, taas oo ka dhigaysa sharciyada xakameynaya arrimo asaasi ah iyo sida loo jaangoynayo dhammaan shaqada. Fikradda waa hage taa oo keena rabitaanka feylka ama isku dhafka arimaha asaasiga ah iyo in la keeno foomka. Haddii fekerku ku wareegsan yahay hawlgallada, shaqada ayaa joojisa. Haddii fekerku yahay mid degan, shaqada malayshida iyo rumaysadka ayaa la dhammaystiri doona doonista. Foomka waxaa la sameeyey qaab jidheed, waana midab iyo midab la doonayo. Shey yar, sida dhagax ama kareem ama muraayad, waxaa laga yaabaa in la sameeyo iyada oo gacanta midigta ee bidixda ah, xarafka dhexe ee ka soo horjeeda midba midka kale. Markaa dhagaxa ama muraayadda ama muraayadda waa in la qiyaasaa oo sawirka waa in lagu qabtaa fekerka iyo duufkeeda. Jumlada gacanta ee gacmoonku waa dhul uu sawirka kiriimka ama muraayadda, sida jeermiska ama abuurka, uu bilaabo inuu koro. Iyada oo qiyaasta xoogga ah ee u dhaxeysa gacmaha, raajada ama raajada iftiinka ayaa la sameeyaa si ay u socoto qotomada maskaxda, illaa maraakiibta qiyaasta la doonayo iyo midabka iyo laalaabka la soo saaro. Foomamka ayaa la sameeyay oo waxaa lagu soo saari karaa habab caqli-gal ah, laakiin way fududahay in la helo qaababka la doonayo ee hababka caadiga ah marka loo eego tababbarka lagama maarmaanka ah si loo soo saaro si macquul ah. Laakiin way u wanaagsan tahay nin inuu yeesho rumaysad, inuu kobciyo khibradiisa, inuu barto isticmaalka rabitaanka. Horumarinta ama hirgelinta saddexda nooc ee suugaaneed waxay ka dhigi doonaan nin. Kadibna wuu awoodaa, laakiin suurtagal maaha inuu isagu noqon doono, samaynta dhagaxyo qaali ah ama qaabab kale oo ay ku jiraan hababka sixirka ah.
Sidee gacmaha loo isticmaali karaa bogsashada jirka mid ka mid ah jirka ama qeyb jirka ka mid ah?
Tilmaamaha lama siin karo taas oo ku haboon dhammaan noocyada cudurrada, laakiin tilmaamaha waa la siin karaa si loogu caawiyo daaweynta dastuurka iyo degaanka maxaliga ah, oo guud ahaan guud ahaan u adeegsan kara. Waxay u fiican tahay kuwa u bogsanaya inay fahmaan dhowr aasaasiyaal oo ku saabsan jirka iyo dabeecadda macmalka ah, ka hor intaanay isku dayin daaweynta magnetka, jidhkooda ama kuwa kale.
Jidhka jirka ayaa ah arrin kala duwan oo ku habboon shuruucda qaarkood, qayb kasta si ay u fuliso shaqooyin gaar ah oo ujeedooyin gaar ah u yeeshaan, daryeelka guud ee guud. Cabbirka jireed ayaa la isku qabtaa, dayactiraa oo la dayactiraa, iyada oo qaabka miisaanka jirka ee miisaanka leh ee qaabka uu ku dhex jiro. Shaqooyinka dabiiciga ah ee jidhka jirka, sida nuugista, dheefshiidka, kala soocida, baabi'inta, iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn, waxaa lagu qaadaa jirka jir ahaaneed ee qaabka jirka dhexdiisa. Shuruucda qaarkood waxay xukumaan dhammaan hawlaha jirka. Haddii sharciyadan la jabsado, fawdada jirka waa la raaci doonaa. Tilmaamahan ayaa caddaynaya in qaar ka mid ah qaladaadka la sameeyey, iyo in ay jirto xayiraad ama in ay jiraan caqabado badan oo jidhka ah oo ka hortagaya jirka magnetka ah in uu keeno xiriirka isdhexgalka ee qeybihiisa ama shaqooyinka, ama in uu jiro kharash dheeraad ah tamarta marka loo eego ilaha dhaqaale ee ay bixin karaan. Jidhka qaabka macmiilku waa baqshad wax lagu kaydiyo iyada oo loo marayo falalka guud ee nolosha. Jidhka macmalka waa dhexdhexaadinta isku xirnaanta nolosha guud ahaaneed. Iyadoo aan laheyn maaddada macmalka, tirada jirku waxay u rogi doontaa boodh.
In lagu daaweeyo cilladaha gacmaha, gacanta midig ayaa la dhigayaa wejiga iyo gacanta bidix ee dhinaca dambe ee madaxa. Ka dib markaad ku sugnaysid daqiiqado yar, gacanta midig waa in lagu dhejiyaa laabta iyo gacanta bidix ee ka soo horjeeda dhabarka. Dhowr daqiiqo gacanta bidix waa in lagu dhajiyaa yar yar ee dhabarka iyo calaacasha gacanta midigta xuddunta. Hal daqiiqo ama laba gacmood midig waa in si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u dhaqdhaqaaqa dusha sare ee caloosha-jihada ee saacada saacaddu tahay sagaal iyo afartan sagaal jeer kadibna la geeyaa booskiisa koowaad waxaana loo oggol yahay in uu sii joogo seddex daqiiqado. Gacanta bidix waa in lagu hayaa, iyadoo calaacalaha hoostiisa hoosta ku jira, inta lagu jiro dhaqdhaqaaqyada gacanta midig. Jidhku waa inuu ku jiraa booska dib loo dhigo.
Marka la eego daweyn kasta oo maxalli ah, gacanta bidix waa in lagu dhejiyaa qaybta ay saameeyeen iyo gacanta midig dhinaca dhinaca dambe ee qaybta oo waxaa loo oggol yahay inay joogaan qiyaastii shan daqiiqo ama illaa iyo wakhtigaas oo sida qofku dareemo dabiici ah in ay tahay waqtigii la joojin lahaa . Daaweynta maxalliga ah waa in la hormariyaa ama la raaco daaweynta guud ee marka hore la sharraxay. Qaybaha jidhka ayaa laga yaabaa in la xoqo, laakiin xoqidda waa in ay ahaato mid taxadar leh. Daaweynta qallafsan badanaaba waa ay dhaawaceysaa iyadoo la raacayo hababkaas.
Gacmaha jidhku ma soo saaro daaweynta; qaabka macdanta ee gacanta ku jirta ma soo saaro daaweynta. Daawada waxaa soo saaray nolol caalami ah, taas oo loo sameeyay qaabka magnetka ee gudaha jidhka iyada oo loo marayo gacmaha. Sheyga gacmaha ee jirka ku jira wuxuu yahay in uu nolosha guud ahaan u sameeyo qaabka magnetka iyo inuu xoojiyo qaabka magnetka si uu u helo ama u kaydiyo oo uu si toos ah ula xiriiro nolosha guud. Marka la daaweynayo qof naftiisa ama jidhka kale, waa in si fiican loo fahmo in maskaxdu aanay saameyn karin daaweynta, iyo in maskaxdu aanay isku deyin in ay toosiso hirgelinta ama u fara-geliso socodkeeda. Haddii qofku uusan maskaxdiisa ku haynin dabeecad xasilooni leh, si uusan u faragelin daaweynta, waxaa haboon in aan la raacin dhaqanka halkan lagu soo jeediyay. Isku dayga maskaxda si loo xakameeyo daaweynta iminka waxyeello u geysata qaybta weyn ee jirka si ay u qanciso qayb yar. Laakiin dhab ahaantii dhammaan qaybaha ayaa dhaawacaya jiidashada. Tani ma aha maskax ama bogsiin maskaxeed. Daaweynta magnetic tan sida lagu sharaxay waxay kicinaysaa jirka magnetic si ay u cusbooneysiiso ficilka iyo nolosha adduunku ku buuxsami doono. Si wax looga qabto daaweynta jidhka, jidhku waa in la siiyaa cuntooyinka qofku u arko in ay u baahan tahay dayactir iyo hagaajinta dhismaha, iyo dhammaan wasakhda ama dheellitirka jidhka waa in la joojiyaa.